နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ခုက အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားပြီး ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံစဥ? - Yangon Media Group
နိုင်ငံရေး ပါတီတစ်ခုက အစိုးရအဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားပြီး ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပြည်သူနှင့်တွေ့ဆုံစဥ?
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၂၉
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုက အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များကိုဖိတ်ကြားပြီး ကျောင်းဝင်းအတွင်း ပြည်သူနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် ပါတီအလံစိုက်ထူခဲ့မှုနှင့် ပါတီတံဆိပ်များကပ်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ် တည်ဆဲဥပဒေနှင့်ညီမညီ ပြည်ခိုင်ဖြိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်က မေးမြန်းခဲ့သည်။ သြဂုတ် ၂၉ ရက် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မိတ္ထီလာမဲဆန္ဒနယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ မောင်သင်းက နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုမှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများကို ဖိတ်ကြားပြီး အစိုးရပိုင်အခြေခံပညာကျောင်းအဆောက် အအုံတစ်ခုတွင် ပြည်သူလူထုနှင့်တွေ့ဆုံရာ၌ ကျောင်းဝင်းအတွင်းပါတီ၏ အလံစိုက်ထူခြင်းနှင့် ပါတီတံဆိပ်များကပ်ထားမှုတို့သည် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိမေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းနှင့်ပက်သတ်၍ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးသန်း ဌေးက မေးခွန်းတွင် မည်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီ ဟူ၍ဖော် ပြထားမှုမရှိခြင်း၊ တက်ရောက်သူများ၏ အမည် ရာထူးဌာနများဖော်ပြထားမှုမရှိခြင်း၊ အစိုးရပိုင်အခြေခံပညာကျောင်းဝင်းတစ်ခုဟုဖော်ပြထားသော် မည်သည့် ကျောင်းဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိခြင်း စသည့်တိကျမှုမရှိသော ယေဘုယျသဘော ဆန်သောမေးခွန်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရပါ ကြောင်း ပြောသည်။ ”ယခုမေးမြန်းလာတဲ့ မေးခွန်းရဲ့အနှစ်ချုပ်သဘောမှာ မေးမြန်းသူက ယေဘုယျ သဘောမဟုတ်ဘဲ တိကျခိုင်မာစွာဖြင့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖော်ပြတိုင်ကြားလာခဲ့ပါလျှင်တိုင်ကြားသူနှင့် တိုင်ကြားခံရသူနှစ်ဖက်အား စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ပြီးမှသာ အဆုံးအဖြတ်ပေးရမည့် ကိစ္စရပ်မျိုးဖြစ်ပါ တယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍မေးမြန်းသူမှ အချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြင့် ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ သတင်းပေးတိုင် ကြားလာပါလျှင် သက်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်များအား မေးမြန်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်မှသာလျှင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်ညီညွတ်မှု ရှိ၊ မရှိ အဆုံးအဖြတ်ပြု၍ ယခုမေးမြန်းလာသူကို အကြောင်း ပြန်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းသို့ဖြေကြားချက်အပေါ် ဒေါက်တာ မောင်သင်းက ”ဒီမေးခွန်းမေးမြန်းတဲ့အခါ လွှတ်တော်နည်းဥပဒေအရ ပါတီတစ်ခုခု၏ အမည်ကိုမဖော်ပြခဲ့တာဟာ တစ်ဖက်သူ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကိုထောက်ညှာ၍ မဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနေနှင့် ဖော်ပြခွင့်ရှိပါသလား”ဟု ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထံ ခွင့်ပန်မေးမြန်းခဲ့သည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တာ်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ် က ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေအရ ကိုယ်စားလှယ်၏မေးမြန်းမှုသည် ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ ယေဘု ယျသဘောဆန်နေကြောင်း၊ စာဖြင့်မေးမြန်း စဉ်အခါတွင်လည်း ရှင်းလင်းစွာမဖော်ပြဘဲ လွှတ်တော်ရောက်ရှိမှသာလျှင် မူလဖော်ပြ ခြင်းမရှိသည့်ကိစ္စများကို အကျယ်တဝင့် မေးမြန်းနေမည်ဆိုလျှင် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ နှင့် ညီညွတ်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ သဘော သဘာဝအရ သဘာဝမျှတမှုမရှိသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များသာဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။
လွှတ်တော်အစည်းအဝေး ရပ်နားချိန်တွင် ဒေါက်တာမောင်သင်းက ”ရှင်းရှင်း ပြောရရင် တို့တစ်တွေဟာသာမန်အားဖြင့် အစိုးရကိုCheck and Balance လုပ်ဖို့ဆိုတာပဲ သိထားကြတယ်။ တရားရေးမဏ္ဍိုင်လည်းဒီလိုပဲ၊ တကယ်တမ်းကျတော့ ဒီမှာ တက်ရောက်နေကြတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အားလုံးက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုလည်း ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ရမှာပေါ့။ အဲဒီသဘောအရ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ ပါတီအမည် မပြောခဲ့တာပါ။ တမင်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ နဲ့ ပါတီတစ်ခုလို့ပဲသုံးခဲ့တာပါ” ဟု သတင်းမီဒီယာများကိုပြောသည်။
ဆွာနှင့်ရေတာရှည်အကြား ရထားလမ်းရေကျော်သဖြင့်ရန်ကုန်- မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်-နေပြည်တော်ခရီးစဥ?
လယ်ယာမြေ ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို စည်းကမ်းမဲ့စွာ အကွက်ဖော် ရောင်းစားနေခြင်းကို ထိရောက်စွာ ထိန်
ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုနိုင်ရန် တရုတ်ကြိုးစား နေသည်ဟု အမေရိကန်ပြော
အတူတူ တွဲဆိုချင်တဲ့ အဆိုတော်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ အကြောင်းပြောပြခဲ့တဲ့ အောင်ထက်
မူဆယ် ၁ဝ၅ မိုင် အထူးစီးပွားရေး ကုန်သွယ်ရေး ဇုန်အတွင်း မိုင်းတစ်လုံး ထပ်မံတွေ့ရှိ
အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးများနှင့် မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် လတန်ဆောင်တိုင်
တိုင်းပြည်အတွက် အရေးကြီးသည့် နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန် သတ္တိရှိဖို့လိုဟု ?
“ကိုယ့်စိတ်နဲ့ထပ်တူ ကျတဲ့သူကို ရှာရင်းနဲ့ကို မတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်” သွန်းဆက်